अमेरिकामा ‘ईकु’ र अर्पणको ‘फिर्के’ लाग्ने « Ramailo छ
अमेरिकामा ‘ईकु’ र अर्पणको ‘फिर्के’ लाग्ने
फिल्म ’फिर्के’ अमेरिकामा लाग्ने भएको छ । फिल्म निर्माण कम्पनी एस.एम.एस. फिल्म्स प्रा.लि. र अमेरिकामा प्रदर्शनको लागि लक्षिन फाउण्डेशनका बीच सम्झौता भएको फिल्मका प्रस्तुतकर्ता तथा कलाकार सुलेमान शंकरले बताए । फाउण्डेशनका अध्यक्ष लक्षिन गरुङ्गको जानकारी अनुसार आगामी फेब्रुअरीबाट अमेरिकाका विभिन्न शहरमा ‘फिर्के’ प्रदर्शन हुनेछ । नेपालमा यो कमेडी फिल्म पौष २१ गते रिलीज हुँदैछ ।
नेपाल पदर्शन पश्चात अन्य केहि मुलुकहरुमा समेत ’फिर्के’ प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले बताएको छ । फिल्म ‘ईकु’ को नामले चिनिने सुलेमान शंकरको प्रस्तुतीमा बनेको फिल्मलाई रवि डंगोलले निर्देशन गरेका छन् । उनी विगत २७ बर्षदेखि कला क्षेत्रमा छन् । गाउँदेखी शहर पसेको एक सिधा युवाको कथामा ‘फिर्के’ बनेको निर्देशक बताउँछन् । फिल्ममा अर्पण थापा, सुलेमान शंकर, ऋचा शर्मा, क्रिष्टिना पौडेल, बिष्णु सापकोटा, अर्जुन गुरुङ, उज्जवल भण्डारी, पुरन थापा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
ओमलाल गुरुङ र राजेश श्रेष्ठ निर्माता रहेको फिल्मको लेखन अभिमन्यू निरवीकोे छ भने अष्ट महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन तथा राम कुमार केसीको छायांकन छ ।